Izizathu ezili-10 zokuba amashishini amancinci angayihoyi iMidiya yokuSebenza | Martech Zone
Izizathu ezili-10 zokuba amashishini amancinci angayihoyi iMidiya yokuNxibelelana
NgoLwesibini, Januwari 28, 2014 NgoMvulo, nge-27 kaJanuwari, 2014 Douglas Karr
UJason Squires ubeke uluhlu olunomdla lwe Izizathu ezili-10 zokuba amashishini amancinci angayihoyi iMidiya yokuNxibelelana. Inika bonke ubungqina nakweyiphi na imfuno zeshishini elincinci ukuba babenomdla wokuba bangathathi i-dive. Ndizinciphise zonke ezi zizathu zibini, nangona:
Oogxa bakho, amathemba kunye nabathengi bakho ngoku. Ngaba ukhona xa bafuna uncedo? Ngaba ubakhona ubacebisayo kwintengiso yabo elandelayo?
Ukhuphiswano lwakho lusenokungabikho! Abantu abaninzi basebenzisa oku njengesingxengxezo… akukho mntu kwishishini lethu okwi-media media. Wowu… lithuba elihle kangakanani lokuba utyale iflegi yakho emhlabeni! Ingaba ulunde ntoni? Ukhuphiswano lwakho ukuqala?
Ukubonakaliswa, ukwamkelwa, ukuthembeka… zonke ezi zinto zibangela ukoyisa imicimbi yokuthembana. Ukubeka ubuntu bakho nabantu bakho phambi kwenkampani yakho endaweni yokuzifihla emva kwegama lakho kukwenza ube sesichengeni. Oko kuvakala ngathi kubi, kodwa ayisiyiyo. Abantu bafuna ukusebenza nabantu - hayi iilogo!
Jan 31, 2014 kwi-7: 29 AM
hey! ndinombono omkhulu ukusuka kwibhlog yakho cz ndiqhuba ishishini elincinci kwaye ndicinga ukukhuthaza kwi-intanethi. Ngoku ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ngoncedo lweposti yakho. 🙂
Feb 1, 2014 ngo-3: 34 AM
Silandele yonke iMigaqo yeendaba yezeNtlalontle kwiShishini lethu elincinci kwaye AKUKHO nto isebenzayo njengoko iMithombo yezeNtlalontle uGurus yaxela kwangaphambili - Konke oku kukunganyaniseki kwaye AKUKHO 100% isiqinisekiso sempumelelo. Besingenaso isizukulwane esikhokelayo, HAYI UKUTHENGA KWIINTENGISO kwaye akukho nto sizamile ukuqhubela phambili ishishini. Kodwa sichithe imali eninzi yokuthengisa. Kwaye nceda ungasixeleli ukuba siyenzile yonke into engalunganga kuba khange siyenze- i-Facebook, i-Twitter, iPinterest, iBhlog kunye neWebhusayithi… ingcebiso… Yonke inkohliso.
Feb 2, 2014 ngo-6: 09 PM
@anthonysmithchaigneau: disqus iziphumo zakho AZIQHELEKILE kwaye ngekhe ndithi "uyenzile kakubi". Ukuba uqhubeka nokufunda ibhlog yethu, uyakubona apho sityhalele umva ngokuchasene 'negurus'. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba kugxilwe kumjelo wamajelo amaninzi kunasekuhlaleni nje. Amanye amashishini akakho okwangoku, ezinye iindawo azikho, kwaye ngamanye amaxesha ayisiyiyo inkcubeko efanelekileyo kwishishini. Ndicinga ukuba ihlala ihlekisa indlela abacebisi beendaba zentlalo bafumana ngayo iziphumo ezilungileyo… kufana negqwetha elikhuselayo amagqwetha course Ewe i-'gurus 'ifumana iziphumo kuyo… yile nto bayenzayo ukuziphilisa. Ayingawo onke amashishini afanayo, nangona!
Ndiyakholelwa ke ukuba kutheni, kwii-polls zorhwebo ze-2013, abathengisi babuyisele ingqalelo yabo kwintengiso ye-imeyile njengesicwangciso esiliqili. Siyawathanda amajelo eendaba ezentlalo ukuba asisebenzise 'njenge-echo' kunye nokukhuthaza umxholo wethu - kodwa sisaxhomekeke kwezinye iindlela ezinje ngokukhangela, i-imeyile, intengiso kunye nemizamo ephumayo. Enkosi ngokujoyina incoko!
Jan 7, 2016 kwi-5: 08 AM
Impendulo entle ezolileyo evela kuDouglas yaya ku-Anthony.
Oktobha 14, 2016 ngo-6: 19 PM
Ezinye zezizathu ezilungileyo zokuya kwimidiya yoluntu! Ndikufumene kunzima ukufumana umxholo oza kuwuthumela de umhlobo wam andixelele ukuba ndisebenzise iCapzool, banezithuba esele zenziwe kumashishini am omabini, kwaye baya kwenza ngakumbi xa ndiyicela. Kukho nekhalenda yengcebiso ethi indinike izithuba zemihla ngemihla yonyaka. Ndicebisa ukuba wonke umntu ayisebenzise!